Kiisaskii ugu horreeyay ee Coronavirus oo laga helay Kooxda Barcelona & Labo shaqsi oo uu ku dhacay | Somali football world
Home SOOMAALI Kiisaskii ugu horreeyay ee Coronavirus oo laga helay Kooxda Barcelona & Labo...
Kiisaskii ugu horreeyay ee Coronavirus oo laga helay Kooxda Barcelona & Labo shaqsi oo uu ku dhacay
(Barcelona) 26 Mar 2020. Ciyaartoyda kooxda Barcelona ayaa guryahooda ku karaantiilnaa muddooyinkii u dambeeyay si la mid ah sida dadweynaha reer Spain, waxaana muddada karaantiilka lagu kordhiyay toddobaadyo hor leh.
Madaxa adeegyada caafimaadka kooxda Barcelona, Ramon Canal ayaa noqday shaqsigii ugu horreeyay ee naadigaas ka tirsan oo laga helay xanuunka coronavirus sida laga soo xiganayo La Vanguardia.
Sidoo kale feyruska waxa uu gaaray mid ka mid ah shaqaalaha naadiga kubadda gacanta Barca oo lagu magacaabo Josep Antoni Gutierrez, iyadoo labadaasi shaqsi ay hadda ku jiraan isbitaalka.
Xiddigaha ka tirsan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay naadiga Barcelona ayaa tababar ku sameynaya guryahooda, waxaana la arkayay Luis Suarez oo ku soo laabtay xaalad caafimaad kaddib sawir uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka.
Dr. Canal oo dhashay 1961-kii ayaa kooxda Barca ka howl billaabay 2006 kaddib saddex sano oo uu dowladda hoose ee Catalonia ka shaqeynayay, halka Gutierrez oo dhashay 1956-kii uu kooxda yimid sanaddii 1993-kii isagoo ku sugan tan iyo markaas.
Next articleBarcelona oo shaaca ka qaadday qiimaha ay ku iibineyso Griezmann & Ingiriiska oo looga gacan haatinayo